Muxuu halyeeyga Man United ee Rio Ferdinand ka yiri horyaalka cusub ee European Super League? – Gool FM
Dajiye April 19, 2021
(Manchester) 19 Abriil 2021. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Manchester United, ee Rio Ferdinand, ayaa sheegay in tartanka horyaalka cusub ee European Super League uu yahay dagaal ka dhan ah kubadda cagta.
Dhinaca kale Rio Ferdinand ayaa ku tilmaamay wax ceeb ah go’aanka ay qaadatay kooxda kubadda cagta Manchester United, kaasoo ay ku ogolaatay inay ka qeyb gasho tartankan.
Gudiga qaban qaabada tartanka oo uu madax u yahay Florentino Perez, madaxweynaha Real Madrid, ayaa xalay daaha laga rogay qorshihii horyaalka cusub ee European Super League, iyadoo warbixin la soo saaray lagu xaqiijiyay in 12 kooxood oo ka mid ah kuwa ugu waa weyn Yurub inay dhisayaan tartan cusub oo la dheelayo bartamaha todobaadka.
Manchester United, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa dhammaantood ku biiray tartankaan, iyadoo loo aqoonsaday inay yihiin aas-aasayaasha tartankan cusub.
Haddaba Rio Ferdinand oo ka hadlayay horyaalka cusub ee European Super League ayaa wuxuu yiri:
“Kani waa dagaal ka dhan ah kubadda cagta, waa wax laga xishoodo, waxayna ka soo horjeedaa wax walba oo kubadda cagta ku hareereysan.”
“Ma jirto tixgelin taariikhi ah, waa cuqdad, runti anigu ma rumaysan karo inay taasi dhacday, sidee bay ugu dhiirran yihiin inay tan ku sameeyaan cimilada aan ku jirno xilligan iyadoo cudurku ku sii faafayo adduunka.”
“Waan ka xishooday go’aanka Manchester United, waana ka xumahay, haa, waxaan ahay taageere waana jeclahay kooxda, laakiin kuma taageeri karo United arintaan.”
Chelsea oo duullaan ku ah Real Madrid...(Waa kuma xiddiga ay ka doonayaan?)